Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo booqasho ku tegay Kenya+Sawirro - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo booqasho ku tegay Kenya+Sawirro
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxaa ay maanta gaareen Magaalada Mooyaale oo ku taalla xadka labada dal ee Gobolka Marsabit, iyada oo halkaasi siwyen loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa waxaa Magaalada Mooyaale kusoo dhaweeyay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo masuuliyiin kale Sar sare oo ka tirsan dowladda Kenya.
Ujeedka safarka Ra’iisul Wasaaraha itoobiya ee Magaalada Mooyaale ayaa waxaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ee Abiy Axmed & Uhuru Kenyatta ay si wadajir ah u furi doonan bar kontorool oo ku taalla xuduudda labada waddan.
Sidoo kale Isla maalinta waxay labada hoggaamiye booqan doonaan gobolka Lamu iyagoo kormeeri doona dhismaha dekedda cusub ee Lamu, dekaddaas oo isku xiri doonta adeegga Kenya, Suudaanta Koonfureed iyo Itoobiya.
Markii u dambeysay ee Abiy uu Kenya tago ayaa waxaa ay aheyd bishii Maarso sanadkii 2019, xilligaas oo isaga iyo Madaxweyne Farmaajo ay wadajir diyaarad uga raaceen Addis Ababa, kana degay Nairobi, xilligaas oo aheyd markii labada dal Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda xumaaday, kaddib markii Kenya Safiirkeeda u yeeratay, halka Safiirkii Soomaaliya ku amartay inuu dalkiisa dib ugu laabto.
Previous articleYuusuf Indha-Cadde” Waxaan diyaar u nahay inaan difaacno musharixiinta sidii aan u difaacnay…
Next articleSoomaali lagu helay inay gudbisay Hub loo waday Xuutiyiinta Yemen